Vivo Y31 (2021) waa nooc dhexe oo cusub oo leh Snapdragon 662 iyo Android 11 | Androidsis
Vivo waxay xaqiijisay taleefan cusub, dhammaantood markay soo bandhigeen saacado ka hor cusub Vivo Y20G, Midranger xiiso leh kuwa aan rabin inay lacag badan qarash gareeyaan oo ay leeyihiin taleefan shaqooyin badan wata. Hadda shirkaddu waxay ku dhawaaqeysaa Vivo Y31 cusub (2021) oo leh astaamo aad u kala duwan, oo ka mid ah tusaale ahaan processor-kiisa.
Vivo Y31 (2021) wax shaqo ah kuma lahan qaababkii hore, waxay qaadaysaa tallaabo aad u weyn adoo ku dhejinaya shaashad muhiim ah oo ka weyn 6 inji iyo nooca ugu dambeeya ee Android. Taleefanka ayaa lagu xayeysiiyaa Hindiya, laakiin shirkaddu waxay ballanqaadeysaa inay si weyn taleefannadeeda ugu soo degayso Yurub "dhowaan."
1 Waxaan ku noolahay Y31 (2021), oo udub dhexaad u ah soo jiidasho leh
2 Maalinta oo dhan baytariga
3.1 Vivo Y31 (2021) xaashi farsamo
Waxaan ku noolahay Y31 (2021), oo udub dhexaad u ah soo jiidasho leh
Vivo waxay go'aansatay inay ku dhawaaqdo nooca Y31 (2021) Suuq ay ku leeyihiin qayb wanaagsan oo ka mid ah boosteejooyinka la iibiyo, tan awgeed waxay ku dhejineysaa guddi 6,58-inch ah oo leh xal buuxa HD +. Waxa ugu fiican ayaa ah in xayndaabku ku fadhiyo ku dhowaad 90% bezel-ka hore waana nooc IPS LCD ah oo siiya tayo wanaagsan.
Sharad ku samee processor aad u shaqeynaya sida Snapdragon 662, waxaa taageera adreno Adreno 610 ah oo awood u leh dhaqaajinta barnaamij kasta iyo ciyaar hada socota. Kaydinta waa 128 GB, laakiin waxa ugu fiican ayaa ah inuu leeyahay boorso leh ilaa 1 TB taageerada iyo 6 GB oo RAM ah si ay u noqoto mid dareera.
Vivo Y31 (2021) wuxuu gadaal ka raacayaa wadar ahaan seddex lenses, midka ugu weyni waa 48 megapixels, kan labaadna waa 2 megapixel macro kan saddexaadna waa 2 megapixel qoto dheer. Qeybta dambe waxay awood u leedahay inay sawirro ka soo qaaddo wax ka yar 4 sentimitir, iyadoo lagu ballan qaadayo sawirro dhow oo dhow.
Maalinta oo dhan baytariga
Batariga uu ku rakibanyahay taleefankani waa 5.000 mAh, oo la mid ah Vivo Y20G, processor-ku wuxuu ku filan yahay inuu maalinta oo dhan ku qaato hal mar oo keliya. Waxay leedahay shaqo badbaadin batari ah si loo baabi'iyo codsiyada asalka ah waxayna leeyihiin adeegyo hoose oo leh barnaamijyada qaarkood.
Xamuulku waa 18W, wuxuu ballan-qaadayaa lacag buuxda saacad iyo labaatan daqiiqo keliya laga bilaabo 0 illaa 100%, iyo sidoo kale inaad tahay xeedho USB-C ah oo aad soo gasho sanduuqa. Haddii kale waa batari ku filan inuu bannaanka la joogo madax-bannaani ku filan maalinta oo dhan.
Qeybta isku xirnaanta, Vivo Y31 (2021) waxay la timid wax walba waxa bixiya meel kasta oo dhexdhexaad ah waa 4G / LTE terminal, maaddaama Snapdragon ay ka go'an tahay isku xirnaantan oo aan ahayn 5G. Sidoo kale, Vivo Y31 (2021) wuxuu leeyahay Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB-C, wuxuuna dusha sare ka xiran yahay kumbiyuutar dhan 3.5mm.
Nidaamka qalliinka waa Android 11 oo leh xirmo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee bisha Diseembar, waxay sidoo kale ballan-qaadaysaa ugu yaraan laba sano oo buuxa oo cusbooneysiin software ah. Lakabka waa FunTouch OS 11, Waxay kudareysaa astaamo badan oo cusub waana software sifiican ufiicnaanaya bilaha marka ay marayaan waxyaabo faro ku tiris ah oo cusub.
Vivo Y31 (2021) xaashi farsamo
XADGUDUB Y31 (2021)
MUUQAAL IPS LCD leh Full HD + xallinta 2.400 x 1.080 pixels of 20: 9 iyo xagal 6.58 inji
PRORESOR Qualcomm Snapdragon 662
KAADHKA CARRUURTA Adreno 610
Kaydinta Gudaha 128 GB / Waxay leedahay booska MicroSD oo leh taageero ilaa 1 TB
KAAMARKA DAR Saddex: 48 MP main + 2 MP macro sensor + 2 MP sensor sensor taas oo u oggolaaneysa in sawirro laga qaado meel u dhow illaa 4 cm
KAAMI HOR 16 MP sawir qaade
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 11 hoosta FunTouch OS 11
BATARY 5.000 Mah waxay taageertaa 18W lacag deg deg ah
Isku xirnaanta 4G / LTE / Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / USB-C / 3.5mm Jack
MUUQAALO KALE Side Mount fingerprint akhristaha
Vivo Y31 (2021) waxay ku timid labo midab, Racing Black (madow oo leh qaar ka mid ah codadka cad) iyo Badweynta Buluugga ah (Badweynta Badweynta) qiimaha waa INR16,490 (185 euro). Hadda waxaa loo heli karaa iibsashada dukaamo kala duwan, oo ay ku jiraan Amazon India iyo goobo kale sida Flipkart. Toddobaadyada soo socda waxay ku imaan doontaa hoos kale sida casaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Vivo Y31 (2021) waa nooc dhexe oo cusub oo leh Snapdragon 662 iyo Android 11